I-Tightwad Terror ngoLwesibili - Ama-Movie wamahhala we-9-14-21 - iHorror
Ikhaya Ama-movie ama-Horror I-Tightwad Terror ngoLwesibili - Ama-Movie wamahhala we-9-14-21
I-Tightwad Terror ngoLwesibili - Ama-Movie wamahhala we-9-14-21
by UJames Jay Edwards September 14, 2021
by UJames Jay Edwards September 14, 2021 127 ukubukwa
Sawubona Tightwads! KungoLwesibili futhi, futhi lokho kusho ukuthi ama-movie wamahhala avela kuTightwad Terror ngoLwesibili! Boo!
Night of the Demons (1988), ihlonishwa yi-International Film Marketing.
Ubusuku Bamadimoni imayelana nentombazane ekhishelwe ngaphandle eqhuba iphathi ngobusuku be-Halloween, futhi zonke izingane ezithandwayo ziyaphuma zize kuyo ngoba iphathi isendaweni yokugcina izidumbu eshiywe ngokukhohlakala. Kuyiqiniso ukuthi kuyabizwa amadimoni, futhi intsha iyafa.
Uzoqala ngaphi ngalokhu? Inesinye sezigcawu ezingalibaleki emsebenzini wokumemeza kwendlovukazi u-Linnea Quigley, okubandakanya ishubhu le-lipstick nendawo esondelene kakhulu yomzimba. Ibuye ibe nesigaxa sokuhlanya esingahlobene nalokhu kulandisa okuyinhloko. Ngeza kokunye ukugqwayiza kwamakhredithi okuvula amahle, futhi uthole owine i-bona-fide. Ubusuku Bamadimoni yenziwe kabusha ngo-2009, kepha ungabona okwakuqala ngo-1988 lapha kuShoutFactoryTV.
I-Grizzly (1976), ihlonishwa yi-Film Ventures International (FVI).
Eminyakeni elandelayo emihlathini, Kubonakala sengathi zonke izitudiyo ezincane eHollywood zenza indoda iqhudelana nesilo movie njengemali ebamba imali, kepha ngo-1976 I-Grizzly ivelele njengenye yezinto ezihamba phambili. I-movie iyikhophi ye-beat-for-beat enhle kakhulu emihlathini, esikhundleni soshaka ngebhere nolwandle ngehlathi - I-GrizzlyIphosta laze laziqhayisa ngokuthi ibhere “lalinemihlathi eyingozi kunazo zonke emhlabeni.”
Kuqondiswe nguWilliam Girdler (naye owenzile Usuku Lwezilwane futhi IManitou), I-Grizzly uthola isikweletu esingeziwe ngokusebenzisa amabhere wangempela ezigcawini ngaphandle kwabalingisi - kusobala, ngenxa yezizathu zokuphepha, izigcawu nabalingisi basebenzise insizwa ebukhoneni (obukholisayo). Le movie yesilo emnandi ngokumangalisayo iyabonakala lapha eTubi TV.
I-Battle Royale (2000), ihlonipha i-Anchor Bay Films.
Battle Royale imayelana nesigaba sezingane zaseJapane zesikole esiyiswa esiqhingini esisele sodwa futhi sinikezwe izikhali nemiyalo yokulwa kuze kube yilapho sekusele oyedwa kuphela ophilayo. Ngakho-ke, empeleni Imidlalo Ye-Hunger, kodwa emuva ngo-2000.
Ngonya kanye ne-apocalyptic, Impi Yasebukhosini kufanele kubhekwe njengokubukwa okubalulekile, ikakhulukazi kubalandeli be- Umdlalo Oyingozi KakhuluFlick -ukuthonya. Uma kunguwe lowo, yinikeze ukubukeka okulungile lapha kuVudu.
IVillage (2004), ngezilokotho ezinhle zeBuena Vista Pictures.
The Village isiqeshana sesikhathi mayelana nedolobhana elikude elikhona phakathi kwamahlathi asePennsylvania. Abahlali banokuqonda ngezilo ezihlala ehlathini - bahlala esigodini sabo, futhi izilo zizobashiya bodwa. Isivumelwano sibekelwa inselelo lapho omunye wabantu bakule ndawo ethatha isinqumo sokufuna usizo lwezempilo edolobheni eliseduzane abakholelwa ukuthi selwedlule ihlathi (kodwa okungakaze kube khona muntu kulo).
Le Flick ka-2004 M. Night Shyamalan yabhangiswa lapho idedelwa, kepha ibamba ngendlela emangalisayo namhlanje. Ngalesi sikhathi emsebenzini wakhe, uShyamalan wayeyimbangi yamandla, ngakho-ke abalingisi bagcwele amagama afana noSigourney Weaver, uBryce Dallas Howard, uWilliam Hurt, uJoaquin Phoenix, u-Adrien Brody, uMichael Pitt, uJesse Eisenberg, uJudy Greer noBrendan Gleeson. O, futhi yebo, kukhona ukuguquguquka kwe-Shyamalanian. Thola The Village lapha eTubiTV.
I-The Last Days on Mars (2013), inhlonipho iMagnet Releasing.
Izinsuku Zokugcina ku-Mars
Njengoba nje igama libonisa, Izinsuku Zokugcina ku-Mars imayelana nezinsuku zokugcina zohambo lwesayensi eplanethi iMars. Ngenkathi elungiselela ukubuyela ekhaya, omunye wososayensi ukholelwa ukuthi ubutholile ubufakazi bokuphila, futhi uyaphuma ukuqoqa izibonelo eziningi. Uyanyamalala, futhi ngamunye ngamunye, kanjalo neqembu lonke. Labo abasele kufanele banqume ukuthi bazama yini ukuthola osebenza nabo, noma bazisindise bese beya ekhaya ngaphandle kwabo.
Izinsuku Zokugcina ku-Mars yinkinga ejwayelekile ye-space space movie emigqeni ye- Moon or I-Martian, kodwa ngebhonasi engeziwe yezilo zaseMartian ezingaba khona. Abalingisi abababazekayo bahlanganisa uLiev Schreiber, uRomola Garai, u-Olivia Williams, u-Elias Koteas, uJohnny Harris, uGoran Kostic, uTom Cullen noJusra Warsama. Ukubamba Izinsuku Zokugcina ku-Mars lapha eCrackle.